Iindaba -Ukusika ubushushu kulawulo lobushushu ngexesha lokwenza ibhegi
Ubushushu ukusika ulawulo lobushushu ngexesha lokwenza ibhegi
Kwinkqubo yokwenza ibhegi, ngamanye amaxesha ukutywinwa kwengxowa akulunganga kangako. Iimveliso eziveliswe ngale ndlela azifanelekanga. Yintoni ebangela le meko? Kufuneka sinikele ingqalelo kwiqondo lobushushu mgawuli
Kuyinto yokungenisa ukulawula ubushushu mgawuli ngexesha lokwenza ibhegi, ukuba iqondo lobushushu alifanelekanga, ibhegi egqityiweyo ayizukufaneleka
Okokuqala, qiniseka ukuba yintoni umxholo esiwusebenzisayo. Izinto ezifanayo ezahlukeneyo ubukhulu obuhlukeneyo ububanzi obuhlukeneyo, kufuna ubushushu obahlukeneyo. Vavanya iingxowa ezininzi ekuqaleni komatshini obalekayo ukufumana ubushushu obufanelekileyo
Okwesibini, izinto ezahlukeneyo zifuna ubushushu obahlukeneyo.
Iqondo lobushushu ukusika ugqiba umgangatho ibhegi, ukuba iqondo lobushushu eliphezulu kakhulu, izinto ziya kunyibilika, ngohlangothi hayi tyaba kunye nezinto iya kuba ngcina, ngoko kuya kuba ibhegi inkunkuma, ukuba amaqondo obushushu asezantsi kakhulu, ayikwazi kunqunyulwa ibhegi ngokupheleleyo, kwaye oko ibhegi elandelayo.
Kwakhona, xa isantya somatshini sihamba ngokukhawuleza, iqondo lobushushu nalo kufuneka lenyuke, xa isantya sisihla, iqondo lobushushu nalo kufuneka lehle ngokufanelekileyo
Sifuna ukucoca umsiki wobushushu rhoqo emva komatshini, emva kokusebenza ixesha elithile, uya kuba nothuli kumsiki, ukuba asicocekanga, uthuli lunokudlulisela engxoweni.
Kwakhona, sidinga imeko yokusika, emva kokusika ubushushu ixesha elithile, kufuneka siyibuyisele entsha, emva kokusika kusetyenziswa ixesha elithile, ayizukuqina kangako.
Ke ukuba sinokulawula ubushushu bokusika ngokuchanekileyo ngexesha lokwenza ibhegi, inokunyusa amandla emveliso, inciphise inkunkuma yengxowa, ukuze sinciphise iindleko.